Mid ka mid ah Wariyaasha Idaacada SBC oo Jeelka loo taxaabay maanta | maakhir.com
Mid ka mid ah Wariyaasha Idaacada SBC oo Jeelka loo taxaabay maanta
Bosaaso:- Mid ka mid ah Wariyaasha Idaacada SBC ayaa la xidhay ka gadaal goortii ay jeelka dhigeen ilaalada wasiirka arimaha gudaha iyo Amaniga ee Puntland Ibaarihim Cartan Ismaaciil (Xaaji Bakiin) waxana ay ku eedeeyeen inuu wariyahaasi warar been abuur ah ka faafiyay Wasiirka, waxayna ku sameeyeen jirdil xoogan.
Wariye C/xakiim Yuusuf Macalin iyo Filim qaade Xasan Cabdi Farey (Gentelman) ayaa saaka waxay u tageen xarunta Dawlada Hoose ee magaalada Boosaaso sidii ay u tabin lahaayeen shir ay halkaasi ku lahaayeen masuuliyiinta Puntland iyo qaybaha bulshada waxaase intii aanu shirku bilaabin ay dameen wariyaashaasi inay waraystaan Xaaji Bakiin isaga oo markiiba intaanu warka siin ku amray in jeelka la dhigo mid ka mid ah wariyaashaasi oo uu sheegay inuu dhawaan warar been ah ka faafiyay.
Wariyahaasi ayaa waxa garaba duub u qabtay Ilaalada khaaska ah ee wasiirkaas iyaga oo markiiba Garacay kana qaaday Kaamaradii waxayna u taxaabeen Jeelka dhexe ee magaalada Bosaaso.
Maamulka Puntland ayaan ilaa haatan ka hadlin xadhiga loo gaystay wariyahaasi iyada oo ay jiraan dadaalo dheeraad ah oo ay wadaan Maamulka Idaacada SBC kuwaasi oo doonay inay soo furtaan wariyahooda.
Wasiirka arimaha gudaha iyo Aminiga Ibraahim Cartan Ismaaciil (Xaaji Bakiin) ayaa Idaacada SBC ku eedeeyay inay sii dayaan warar been ah oo ka dhan ah Maamulka Puntland iyo waliba ku aad loogu durayo isaga shakhsi ahaan.
Dhawaan ayaya ahayd markii wariye Cawaale Jaamac Salaad iyo wariye Idle Macalin jeelka loo taxaabay kuwaasi oo Maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadeen sawirada wariyihii Faransiiska ahaa ee mudooyinka Duleedka Bosaaso lagu hastay.
« Shiikh Shariif ayaa eedayn u soo jeediyay Ururka Midawga Afrika
Wariyihii SBC u shaqayn jiray ee maanta la xidhay ayaa dib xoriyadiisii u helay »